Ngalesisikhathi u-Manuel uzokhiqiza amafilimu amabili omdanso azokhonjiswa okokuqala kwi-JOMBA! ezokhonjiswa okwesibili ngobuchwepheshe bezokuxhumana ngasekupheleni kwalenyanga. Uzobambisana ne-FLATFOOT DANCE COMPANY yaseThekwini enkundleni yezokuxhumana belu. Kulezizinyanga ezintathu uzoba nezigcawu zokucija namasemina kuZoom nabafundi bomdanso base-UKZN.
Umlando ka-Manuel eKapa nokujula kokholo lwakhe lobuSulumane kuyazicacela emsebenzini wakhe. Wazakhela igama ngonyaka wezi-2016/17 ngokwenza imidanso ngayedwana enendikimba ehlanganisa ubuhlanga, inkolo nemibono ngobudoda. Lemidanso ibingezindaba nangesimo sabantu abanganakiwe eNingizimu Afrika. Umsebenzi wakhe omusha ngowezi-2019, obizwa nge-ASLAMA, waveza ngendlela eyethusayo, kodwa enhle, ukubulawa kwabantu e-Syria nodweshu lwangaphakathi kumuntu!
Ungumdansi nothisha onekhono kanti nakuba esebenza njengeciko elizimele uyilungu le-UNMUTE DANCE COMPANY.
UDkt u-Lliane Loots wase-UKZN nongumqondisi wezobuciko nomdidiyeli weJOMBA! uthe ‘kuyintokozo, ngalesi sikhathi esinzima kangaka endimeni yomdanso, ukwemukela elinye lamaciko anamava omdanso eNingizimu Afrika nelinemidanso exoxa izindaba ezingaxoxwa nezingavamile ukuvezwa ezweni.’
Amafilimu omdanso ka-Manuel azokhonjiswa kwiJOMBA! kusukela mhla zingama-24 kuNcwaba kuya mhla zi-5 kuMandulo. Ukubuka lamafilimu ezinkundleni zokuxhumana ngobuchwepheshe kumahhala!
Isithombe: wu-Val Adamson